Liistada Hubinta Waxyaabaha Ecommerce: Ugu Dambeyn Waa Inay Ku Dhacdaa Bakhaarkaaga Onlineka ah. Martech Zone
Liiska Hubinta Astaamaha Ecommerce: Ultimate must-haves for your Online Store
Khamiis, Juun 29, 2017 Sabti, Febraayo 13, 2021 Douglas Karr
Mid ka mid ah qoraalada ugu caansan ee aan wadaagnay sanadkan ayaa ahaa mid dhameystiran liiska qormooyinka websaydhka. Infograafigani waa dabagal la yaab leh oo ay sameyso hay'ad kale oo weyn oo soo saarta macluumaad aan caadi aheyn, Xayeysiinta MDG.
Waa kuwee websaydhka elektaroonigga ah ee muhiimka u ah macaamiisha? Maxay tahay inay calaamadaha diiradda saaraan waqtiga, tamarta, iyo miisaaniyadda hagaajinta? Si aan u ogaanno, waxaan eegnay tiro badan oo sahanno dhow ah, warbixinno cilmi baaris ah, iyo waraaqo tacliimeed. Falanqayntaas, waxaan ku ogaanay in dadka ku nool dhammaan gobollada iyo tooska ay si joogto ah u qiimeeyaan isla isla muuqaalka websaydhka isla marka ay wax ka iibsanayaan internetka. Maxay Macaamiisha ka rabaan Websaydhada E-Ganacsiga
Natiijooyinka cilmi-baaristooda iyo sahamintooda xirfadleyda waxay keeneen 5 qaybood oo waawayn oo ku socda shirkadda ecommerce waxyaabaha ugu muhiimsan ee wacyigelinta wadista, maamulka, iyo beddelaadda. Waxaan ku daray qaar ka mid ah waxyaabaha aan jeclahay ee aniga ii gaarka ah ee ay seegtay natiijooyinka sahanku.
47% macaamiisha ayaa leh adeegsiga iyo ka jawaab celinta ayaa ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee websaydhka elektaroonigga ah
Speed - goobta e-commerce waa inay ahaataa mid dhakhso badan. 3 ka mid ah 4-tii wax iibsade ayaa sheegaya inay ka tegayaan degel internet e-commerce ah haddii ay gaabis tahay inay rarto
Dareenka - hagista, walxaha gawaarida la wadaago, iyo astaamaha goobta waa inay ahaadaan kuwo si fudud loo heli karo loona isticmaali karo.
Tixgelinta - 51% dhammaan dadka Mareykanka waxay wax ku iibsadaan khadka tooska ah ee mobilada, sidaas darteed dukaanku waa inuu si habsami leh uga shaqeeyaa dhammaan qalabka.
Shipping - kharashka dhoofinta oo qaali ah iyo waqtiyada dirista oo dheer waxay saameyn ku yeelan doonaan iibka.
Ammaanka - hubi inaad dhammaan ku baxdo shahaado SSL SSL ah oo aad daabacdo shahaadooyinka hanti-dhowrka dhinac saddexaad.
Return Policy - u oggolow dadka soo booqanaya inay ogaadaan siyaasaddaada soo noqoshada ka hor inta aysan iibsan.
Adeegga macaamiisha - Bixi sheeko ama nambarka taleefanka si looga jawaabo iibka ama codsiyada adeegga.
Macluumaadka Badeecada oo dhameystiran
Soo-booqdayaashu badanaa diyaar uma aha inay iibsadaan, runti waxay halkaas u joogaan inay baaraan. Markaad siiso dhammaan macluumaadka ay u baahan yihiin, waxay u badan tahay inay wax iibsadaan markay dhammaystiraan.
Details Product - 77% macaamiisha ayaa sheegaya in waxyaabaha ku jira ay saameyn ku yeelanayaan go'aankooda iibsiga
Su’aal & Jawaabo - Haddii aanu macluumaadku meesha oollin, 40% dadka wax ka iibsada ee khadka tooska ah ka raadiya hab ay su'aalo ku weydiiyaan oo ay jawaabo ku helaan ka hor iibsashada
saxnaanta - 42% macaamiisha ayaa soo celiyey iibsiga qadka tooska ah sabab la xiriirta macluumaad qaldan iyo 86% macaamiisha ayaa sheegaya in aysan u badneyn inay dib uga iibsadaan goobta ay ka iibsadeen.
Hantida - Ma jiraan wax ka xanaaq badan sidii aad ku heli lahayd dhammaanba inta aanad iibsan ka hor intaadan ogaanin in badeecaddu ay dhammaatay. Ka dhig bartaada iyo natiijooyinka raadinta cusbooneysiinta heerka kaydka adoo adeegsanaya gabbaatooyin hodan ah.
Sawirro, Sawirro, Sawirro
Soo-booqdayaashu waxay inta badan raadinayaan faahfaahinta muuqaalka ah ee alaabada maadaama aysan halkaas u joogin inay si shakhsi ah ugu kormeeraan. Lahaanshaha xulasho weyn oo ah sawirrada xallinta sare waxay kexeyn doontaa iibsasho dheeri ah.
Sawirro badan - 26% macaamiisha ayaa sheegaya inay ka tageen iibsiga khadka tooska ah sababo la xiriira sawirro liita ama sawirro aad u yar.
Go’aamo Sare - bixinta awood u leh inaad ku aragto faahfaahin kooban oo ku saabsan waxyaabaha ku jira sawirka ayaa muhiim u ah dukaamaysato badan oo internetka ah.
Zoom - 71% dadka wax iibsada waxay si joogto ah u isticmaalaan muuqaalka soo-dhaweynta ee sawirrada sheyga
Speed - Hubso in sawiradaada la isku dhejiyay oo laga soo raray shabakad gaarsiinta waxyaabaha si loo hubiyo in si dhakhso leh loo raray. Xitaa waxaad rabi kartaa inaad dib u dhigto sawirro aan diiradda saarin (sida carousel).
Qiimeynta iyo Reviews
Ku darista dib u eegista / qiimeynta eex la'aanta ah bartaada waxay bixin doontaa aragtiyo kaladuwan waxayna kalsooni ku abuureysaa booqdayaasha. Xaqiiqdii, 73% dadka wax iibsanayaa waxay rabaan inay arkaan waxa iibsadayaasha kale ay leeyihiin intaan go’aanka la gaarin
Aan kala go 'lahayn - Macaamiisha kuma kalsoona qiimeynta saxda ah, waxay baarayaan qiimeynta liidata si ay u arkaan haddii fikradaha dadka kale ee sheyga ay saameyn ku yeelan doonaan go'aankooda iibsiga.
Xisbiga Saddexaad - 50% macaamiisha ayaa doonaya inay arkaan dib u eegista alaabada saddexaad
kala duwan - Macaamiisha waxay rabaan inay dareemaan raaxo ku saabsan iibsashada, waxay rabaan inay awoodaan inay la xisaabtamaan shirkadaha, waxayna rabaan inay arkaan dib u eegisyo kala duwan oo diiradda saaraya tayada iyo amniga alaabada.
Nabar jajaban - ballaadhi shaqooyinka qiimeyntaada iyo dib u eegistaada adoo adeegsanaya googogo hodan ah si ay ugu soo baxaan natiijooyinka raadinta.
Raadinta Alaabta Goobta
Raadinta goobta ayaa muhiim u ah khibrad kasta oo ganacsi. Macaamiisha qaar, 71% dadka wax iibsada waxay yiraahdaan waxay si joogto ah u isticmaalaan raadinta, badiyaaana waa waxa ugu horeeya ee ay aadaan barta.
Otomaatig ah - Ku dhis dhisme dhammaystiran oo otomaatig ah oo sifeeya magacyada alaabada, qaybaha, iwm.
Raadinta Semantic - Adeegso raadinta macne si aad u bixiso natiijooyin wanaagsan
shaandheeyeyaashu - 70% dadka wax iibsanayaa waxay yiraahdaan waxay aad u qiimeeyaan inay awoodaan inay ku shaandheeyaan alaabada iyagoo adeegsanaya goobta raadinta
Kala sooc - Awoodda kala soocista dib u eegista, iibka, iyo qiimaha ayaa dhamaantood waxtar u leh dadka isticmaala si ay u helaan alaabada ay rabaan.
Breadcrumbs - Ku dar walxaha socdaalka, sida jajabyada rootiga ee bogagga natiijada
Natiijooyin faahfaahsan - Ku soo bandhig sawirro iyo qiimeyn natiijooyinka raadinta ah
isbarbardhiga - Sii fursad aad ku falanqeyso astaamaha badeecada iyo qiimaha dhinac-dhinac ah.
Tags: baabuur buuxachatmacaamiishaAdeegga macaamiishae-commerceIWMecommercejajabyada ecommerce qaniga ku ahxawaaraha ecommerceganacsigaxayeysiis mdgganacsiga gacantafuranisbarbardhiga sheygamiirayaasha sheygaraadinta alaabtakala soocida alaabtasu'aalaha iyo jawaabahaqiimeyntaku soo laabto siyaasaddaReviewsshemaammaankaraadinta macnahamaraakiibtagoobta raadintaku dhegzoom
Clipcentric: Warbaahinta Rich iyo Maareynta Hal Abuurka Video